Ning: API ရှာဖွေခြင်းများကိုပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်ပုံစံချခြင်း Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 24, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီတနင်္ဂနွေမှာကျွန်တော်ဟာအရာအားလုံးထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုဆွဲယူချင်တဲ့ပရောဂျက်တစ်ခုကိုလုပ်နေတယ် သေးငယ်အင်ဒီယားနား (နှင့်အတူတည်ဆောက်ခဲ့သည် Ning) ကိုဗဟိုစာမျက်နှာသို့။ The Indianapolis မြိတ်ပွဲတော် အပြည့်အဝလွှဲသည်နှင့်အသေးစား Indiana ပြည်နယ်ဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရန်ကူညီချင်တယ်။
Ning ၏ API စာရွက်စာတမ်းများနှင့်နမူနာလျှောက်လွှာများသည်အမှန်တကယ်ချို့တဲ့နေသည်။ စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်အချိန်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတည်ဆောက်မည့်အစားဖြတ်တောက်မှုအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိစာမျက်နှာအလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များစွာမရှိပဲခက်ခဲစွာရေးသားထားသည်။ ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုထပ်မံအတည်ပြုခြင်းအချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ (ဥပမာ - ဘလော့ဂ် urls များကိုဖိုရမ် urls နှင့်မတူစွာပုံစံပြုခြင်း။ )
Ning's လမ်း API ကို Works သည်၎င်းသည် RSS feed တစ်ခုတွင်သင်လိုအပ်သည့်ရလဒ်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည့် query engine တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်တွေ၊ ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုစတာဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံတွေကို upload လုပ်တဲ့သူတိုင်းကသူတို့အကြောင်းအရာတွေကိုအထူး tag လုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ် indyfringe-2008။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုပြန်လည်ရယူသည့်စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းမှုလိပ်စာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည် (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲဖြင့်အောက်ပါ URL နှင့်အစဉ်လိုက်)
စာမျက်နှာအတွင်းမှာ၊ ပြီးတော့အဲဒီစာမျက်နှာပေါ်ကအချက်အလက်တွေကိုငါအသုံးပြုပြီးစုစည်းလိုက်တယ် Magpie RSS အတန်းအစား PHP အတွက် ကုဒ်ပေါ်တွင်ချဲ့ရန်သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုနှိပ်ပါ ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ.
API ကို alformcenter အရွယ်အစား - အလတ်စား wp-image-300 /> ၎င်းကို format လုပ်ပါ။ width =” 159″ height =” 2694″ class =” format လုပ်ပါ။
ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တချို့ရှိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Tyler Ingram တွစ်တာမှတစ်ဆင့်မှန်ကန်သောရက်စွဲများကိုရေးဆွဲရာတွင်အထောက်အကူပေးခဲ့သော (ကျွန်ုပ်၏ဗန်ကူးဗားအထက်တန်းကျောင်းမှ!) ။
ဤတစ်ကြိမ်တွင်၎င်းသည်အသန့်ရှင်းဆုံး code မဟုတ်ဘဲလျင်မြန်စွာအသုံးပြုရန်အတွက် function များကိုစနစ်တကျခွဲခြမ်းထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။ ur URL များကိုစနစ်တကျညွှန်ကြားနိုင်ရန်အတွက်လင့်ခ်များကိုကျွန်ုပ်အစားထိုးသည်၊ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာမှ HTML tag များကိုဖယ်ရှားသည်၊ ရက်စွဲကို format လုပ်ပြီးစာမျက်နှာရလဒ်သည်ဤကဲ့သို့သောပုံစံမျိုးဖြင့်ဖော်ပြရန်စကားလုံးအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်သည် -
အချို့သောအငြင်းပွားဖွယ် Banshee တွင် Babble အချို့သော ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကဲ့သို့ပင် Sidney သည်ကြိုက်နှစ်သက်ရန်အတွက် bits နှင့် bits မဟုတ် ... 8/24 11:55 AM
ဤ API ကို သင်သည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သင်အမှန်တကယ်သတ်မှတ်ထားသော Ning ကွန်ယက်များရှိအကြောင်းအရာများနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအမှန်တကယ်စာရင်းသွင်းနိုင်သည့်အပြင်ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Ning ပါဝင်မှုနှင့်ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ ငါ Ning သည်နမူနာ application များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။